ISky Goggles Storm Emnyama / Cherry - ULLER
I-Previo | Okulandelayo
Isivunguvungu Esimnyama / Cherry
69.95 € 120.00 € Ugcina ama-41% (50.05 €)
Ama-goggles we-Ski ngamalensi we-cherry ku-CAT.1 ngezinsuku zezimo zezulu ezimbi kakhulu: inkungu, iqhwa, imvula, njll.
Izibuko zamehlo I-X-POLAR ngohlelo lwe-Dual Layer AntiFog oluphindwe kabili ukuvikela ukufiphala ngokuvikelwa kwe-UV-400
Uhlelo lwangaphakathi lokungena komoya olunamandla okulwa nokubuyiswa komoya okuqhubekayo futhi luqinisekisa ukubonakala okungcono kakhulu.
I-Anti-Slip Strap itheyiphu yokulungisa okulungile kwezibuko kuya ku-helmet.
Uzimele owenziwe nge-thermoplastic polyurethane yokukhanya okukhulu.
Isembozo se-Microfiber kanye nezitika zifakiwe
Amagagasi ethu okushibilika eqhweni nasekwenzeni iqhwa adalwe futhi ngenxa yezihambi. Izici eziphezulu zobuchwepheshe zokuqinisekisa ukusebenza okungcono kakhulu kanye nokwethenjwa okuphezulu ezimeni ezibucayi kakhulu ngesikhathi se-Freeride. Amaski ethu we-ski adalwe kusuka kuzidingo ezifunwa yiqembu lethu labakhweli bomkhiqizo ngokuya ngazo zombili izinto zokwakha nenduduzo. Lapho imikhiqizo isivivinyiwe, siqoqa lonke ulwazi oludingekayo ukuze sikwazi ukwenza izinguquko ezidingekayo efektri ukufeza izidingo. Kungamikhiqizo ye-premium yezinga eliphakeme kakhulu
Imaski ye-Uller ®
CHERRY Lenses With CAT.1 UKUKHANYA OKUKHANYA
Le modeli yemaski inamalensi anokuvikelwa kwe-UV400 kuGaba 1 lokuhambisa ukukhanya. Lesi sigaba se-lens silungele izinsuku ezinezimo zezulu ezimbi kakhulu: iqhwa, imvula noma inkungu. Ngenxa yokukhanya kwayo okukhulu kanye nokwelashwa okunikezwe i-lens, kuzokuvumela ezimeni ezingezinhle ukuba ube nokukhanya okwengeziwe nokukhululeka okuvela emvelweni.
Sakha amalensi ngezinto zokwakha ezinhle kakhulu ukufeza ukumelana okukhulu nobulukhuni bemithelela, kanye nokuvikelwa okukhulu emisebeni ye-ultraviolet. Konke lokhu ngaphandle kokudebeselela ukukhanya okukunikeza induduzo enkulu.